Soosaarayaasha Soo-Saarayaasha - Shirkadaha Shixnadaha Shixnadaha Shiinaha & Warshadaha
Unisex Poly Cotton jikada Weiter Chef Head Wraps U406S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U406S0100A Cabbirka KOOX SIINE Erayada ugu muhiimsan CUNTADA HEAD WRAPS, WAITER WRAPS Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer-dheer, cirib la'aan, wax-ruxin, lahayn kansar, nolosha adeega waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababo la xiriira xooggeeda sare, iska caabin fiican oo burbursan, shri hoose ...
Maqaayadaha jikada maqaayadaha cuntada ee loo yaqaan 'Waiter Chef Driver Caps U408S9900Q
Nooca CADADKA XARUNTA U408S9900Q Cabbirka KOOXDA Erayada ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan 'chef caps', koofiyadaha waardiyaha, koofiyadaha waardiyaha Dhar 100% suufka tolida dharka polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga oo hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, u adkeysi caariyaysi, iyo dixirigoodu. Gudaha ...
Makhaayadda Waiter Chef Poly cududda Baseball Cap U411S0100B
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U411S0100B Cabbirka KOOX SIINE Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'cheer suger cap', 65005 poly / suufka GSM.155g Xinjiang Aksu suuf dheer, cillad la'aan, ciriir la'aan, majirto wax cudurka kansar, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Nooca CHECKEDOUT Shahaadada OEKO-TEX heerka 100 Item Code U406S0100A Cabbirka KALKA KALKA ereyada muhiimka ah dharka labiska, jaakad qafiif ah, jaakad qafis ah, yunifiga dharka, dharka isboortiga, yunifiga karinta, dharka makhaayadaha, Dharka jikada 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu dhaadheer-dherer leh, wax-kiniinno ah, wax-dhimis lahayn, kansar la'aan, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaan (iftiinka bead ...
Maqaayadda maqaayada kafateeriyada maqaayadaha madax u qoorta U501S0500A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U501S0500A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dheer-dhuujis ah, aan-kiniin lahayn, aan-ruxin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyada kusheega madaxa qoorta U501S8500H
Summadaha CHECKEDOUT Shayga Shayga U501S8500H Cabbirka KOOXDA Erayada ereyada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga T85 / R15 Xarkaha tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaanaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga oo hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, u adkeysi caariyaysi, iyo dixirigoodu. Ku darista ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyada kusheega madaxa qoorta U501S8900Q
Nooca CADADKA XARUNTA I50 Code U501S8900Q Cabbirka KALKA SIILA ereyada furaha ah ee qalabka dhegaha sugaya, madaxa qoorta Farshaanka 100% COTTON Xarkaha Xarigga polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga oo hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, u adkeysi caariyaysi, iyo dixirigoodu. Gudaha ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyada kusheega madaxa qoorta U502S0100A
Astaamaha loo yaqaan 'CHECKEDOUT Shayga' Code Code U502S0100A Cabbirka KALKA SIZE Erayada furaha ah ee qalabka sugaya, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dheer-dhuujis ah, aan-kiniin lahayn, aan-ruxin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyada kusheega madaxa qoorta U502S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U502S0200A Cabbirka KOOX SIINE Erayada furaha ah ee dhejiyaha qalabka sugaya, madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dheer-dhuujis ah, aan-kiniin lahayn, aan-ruxin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda maqaayada kafateeriyada maqaayadaha madax u qoorta U502S0400A
Astaamaha loo yaqaan 'CHECKEDOUT Item Code U502S0400A Cabbirka KALKA SIZE Erayada furaha ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer, cuf-la'aan, wax-dhimis la'aan, cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Makhaayadda maqaayadda cuntada ku xeel dheer madaxa CU504S059000T4
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU504S059000T4 Cabbirka KALKA KHUDBADA ereyada furaha ah ee dharka isku dhejiska ah, madax qoorta, maareeyaha waardiyaha, Dharka dharka hooriska 60/40 poly / suuf GSM.143g Xinjiang Aksu suuf dheer-dhejis ah, bilaa biya-shubis ah, aan-ruxin, carcinogens, nolosha adeegga waa 2 jeer sida jaakad qafis caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababta oo ah ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyada kusheega madaxa qoorta U502S0700A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U502S0700A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dheer-dhuujis ah, aan-kiniin lahayn, aan-ruxin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...